ကာချုပ် ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင် နှင့် ကြံ့ဖွံ့အမတ်မင်း (ဗိုလ်) ဦးလှဆွေတို့၏ ကြောင်းတူသံကွဲများပြောဆိုချက်များ (Tu Maung Nyo) | MoeMaKa Burmese News & Media
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအထူးဒေသ(၂) “ဝ”ပြည်နယ်အစိုးရသည် (KIO) နှင့် အစိုးရ၏ “ငြိမ်းချမ်းရေးဖေါ်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ”တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေးအတွက် တာဝန်သိသော စိတ်ထားဖြင့် အဆိုပြုချက်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုလာခဲ့သည်။
နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်များ “ပန်ဆန်း” တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရန်စီစဉ်ပေးမည်ဟု နှစ်ဖက်စလုံးသို့ ဖိတ်ကြား အဆိုပြုလိုက် ပါသည်။
ထို့အပြင်၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအထူးဒေသ(၂)“ဝ”ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေသ (၃) (SSA/SSPP) ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအထူးဒေသ(၄)(မိုင်းလား) တို့၏ (၃) ဖွဲ့ ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်သည်။
ပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ကို နှစ်ဖက်စလုံးမှ ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းပြီး၊ နိုင်ငံရေးစကားပြောကြရမည်။
“ရွှေလီ”မှာပြောသည်ထက် “ပန်ဆန်း”မှာပြောသည်က သဘာဝပိုကျပါသည်။ ပြည်တွင်းပြဿနာကို ပြည်တွင်းမှာသာဖြေရှင်း အဖြေရှာကြရမည်မဟုတ်ပါလော။
ထို့အပြင် “ပန်ဆန်း” တွင် လူချင်းတွေ့၍ ဆွေးနွေးကြသည်က “ ပွင့်လင်းမြင်သာသော Electronic Online မှု” ဆိုသော လွှတ်တော်တိုက်တွန်းချက်ဆိုသည်ထက် ပို၍ အလုပ်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆရသည်။“ ပွင့်လင်းမြင်သာသော Electronic Onlineမှု” ဖြစ်မြောက်ရန် လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်လာဖို့ ၊ လျှပ်စစ်မီးမပျက်ဖို့လိုသည်။ MPT ၏ နှေးကွေးသော online ဝန်ဆောင်မှုမျိုးဖြင့်မဖြစ်နိုင်ချေ။
ဆွေးနွေးမည့်နေရာကိစ္စမှာ နှစ်ဖက်စလုံးလက်ခံနိုင်မှသာဖြစ်မြောက်လိမ့်မည်။ ဆွေးနွေးပွဲ အောင်မြင်မည်/ မအောင်မြင်ဆို သည့်ကိစ္စမှာအဓိကအားဖြင့် လက်ရှိ စစ်တပိုင်းအစိုးရအပေါ်တွင် အများကြီးတည်မှီနေပါသည်။
(ဗိုလ်) ဦးသိန်းစိန်ကြံ့ဖွံ့အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ တန်းတူရည်တူဆွေးနွေးဖြေရှင်းခြင်းမပြုဘဲ၊ “သေနတ်/လှည့်ဖျားမှု” တို့ ဖြင့်သာ “၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဘောင်”ထဲ ဇွတ်အတင်းသွတ်သွင်းနေမည်ဆိုလျှင် ရလဒ်ကောင်းရနိုင်စရာမရှိချေ။
(၃)ဖွဲ့ ပူးတွဲကြေညာချက်တွင် သုံးသပ်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ “ပြည်တွင်းစစ်မီး၏ ခြေရာကို ပြန်လည်နင်းသွားမှာသေချာလှသည်”
“မဖိတ်ခေါ်၍မပါဝင်နိုင်”ဟု ပြောဆိုခြင်းမှာ “ထမင်းရေပူလာလျှာလွှဲ” ဆိုသည့်သဘောသာဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ပြောဆိုသည် ထက် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၊ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်၏ သဘောထားအမြင်နှင့် ဖြေရှင်းနိုင်မည့် အဆိုပြုချက်တစ်ရပ်၊ လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်ကို တာဝန်သိသိ၊ တာဝန်ရှိရှိ ပြောဆိုရပါမည်၊ ထုတ်ပြန်ရပါမည်။
မိမိတို့ တစ်ပါတီတည်းဖြင့် မစွမ်းသာလျှင် အခြားသောပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်ရေးလိုလားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ဆက်သွယ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သင့်သောကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စသည် (NLD)၏တာဝန်ကြီး ၃ ရပ်အနက် တစ်ခုအပါအဝင်လည်း ဖြစ်သည်။
– ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအထူးဒေသ(၂)“ဝ”ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေသ (၃) (SSA/SSPP) ၊ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းအထူးဒေသ(၄)(မိုင်းလား) တို့၏ (၃) ဖွဲ့ ပူးတွဲကြေညာချက်
– ၁၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ – ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးဗဟိုကော်မတီနှင့် KIO/KIA သို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ တိုက်တွန်းချက်
– မြဝတီသတင်းစာ၊ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၂
– မြဝတီသတင်းစာ၊ ၂၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၂
3 Responses to ကာချုပ် ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင် နှင့် ကြံ့ဖွံ့အမတ်မင်း (ဗိုလ်) ဦးလှဆွေတို့၏ ကြောင်းတူသံကွဲများပြောဆိုချက်များ (Tu Maung Nyo)
mink on January 30, 2013 at 3:45 pm
စာရေးသူနဲ့ နီးစပ်တဲ့စစ်ဗိုလ်တဦး ပြောပြရာတွင် အောက်က စစ်သားတွေကို စစ်တိုက်ရန် ရှေ့ တန်းထွက်ရမယ်လို့ မပြောရဲဘူးတဲ့- ပြောလိုက်ရင် ထွက်ပြေးကုန်ကြတာတဲ့-သူတို့ ရှေ့ က ရဲဘော်တွေ တက်ဆိုလို့တက်တဲ့အခါ ဟိုက အပေါ်စည်းကနေ ပစ်နေတာကိုမြင်ပြီး သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေ ကျ-ကျ-ကုန်တာ သူတို့ မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ မြင်တွေ့ နေရတော့ ရှေ့ တန်းထွက်တယ်ဆိုရင် သေရွာသွားသလိုဘဲ- သူတောင် စစ်ထဲက ထွက်ချင်ပြီတဲ့- ရင်နှီးတဲ့ စစ်ဗိုလ်တဦးပြောတာကို ပြန်ပြောပြတာပါ။
Han Thit on February 1, 2013 at 10:34 am
ဒီ ကချင်ပြည်တွင်းစစ်မီး ကို ငြိမ်းသတ်ပေးကြပါ။ (KIA နဲ့ အစိုးရတပ်)ခင်ဗျားတို့ အဖွဲ့အစည်းချင်းချင်း ဘယ်လိုသဘောထားတွေပဲရှိရှိ၊ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေပဲရှိရှိ စစ်ဒဏ်ကို ခံစားနေကြရတဲ့ အောက်ခြေပြည်သူတွေကို
စာနာသင့်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့တိုက်တိုက် ခင်ဗျားတို့သေရင် ဒယ်အိုး ဆိုတာကို တော့ ကျုပ် အသက်နဲ့ လောင်းကြေးထပ်ရဲတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ခေါင်းဆောင်တွေ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ၊ တပ်မတော်သားတွေ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ အသက်တွေစတေးခံနေရတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အတ္တတွေလျော့ချသင့်ပြီ။ ၀ဋ်ဆိုတာ လည်တတ်တယ်။ တစ်နေ့ ခင်ဗျားတို့ အလှည့်ရောက်လာလိမ့်မယ်။
သမ္မတကြီးကို တစ်ခု တောင်းဆိုချင်တယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေ အမြန်ဆုံးရပ်စဲအောင် ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ ပြည်သူလူထုက ချီးမြှင့်မြောက်စားထားတဲ့ NLD ပါတီ နဲ့ တကွ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးလည်း ဒီကချင်ပြည်တွင်းစစ် အပြီးသတ်ရပ်စဲအောင် အဓိကထားဆောင်ရွက်ပေးကြပါ။
Jack Aung on February 2, 2013 at 3:15 am
People of Burma are not dumb.They’ve already knew who is who.MP U Hla Swe was speaking out the real mind-set of Tatmadaw andapocket of their leaders. This attitude won’t help peace and national reconciliation of Burma. Kachin’s struggle will go on as long as Tatmadaw remains the same.
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● စာဖတ်ခိုင်းကြရုံပဲလား https://t.co/ULDAbMv1wV https://t.co/Em3igEsdnj about 22 minutes ago ReplyRetweetFavorite